फ्लोटिंग बजार, Pasar Terapung लोक ब्रेनन, लोक ब्रेन - Kalimantan
एशिया इंडोनेशिया Kalimantan
ठेगाना: जलन सुन्गाई मार्टापुरा, देसा सुङ्गई तन्दिपे, किममतन सुङ्गई ताकुक, सुङ्गई तन्दिपा, सुङ्गई ताबुक, Banjar, कलमantan Selatan 70653, इंडोनेशिया टेलिफोन: +62 511 6747679
इन्डोनेशिया एक अद्भुत देश हो। त्यहाँ धेरै धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र वास्तुकला आकर्षण छन् । दक्षिणपूर्व एशियाको कुनै देशमा , इंडोनेशियाको संस्कृतिको विशेषताहरूले अचम्मलाग्दो चीजहरू सिर्जना गर्न सक्छ। र यहाँ पनि साधारण खाना बजारहरू एक रोचक चिन्ह हो। हाम्रो लेख Banjarmasin को अस्थायी बजार को बारे मा छ।
अस्थायी बजारको विवरण
Banjarmasin को अस्थायी बजार को लोक बोन्ट भनिन्छ, किनकी यो एक नै नाम को सानो नदी को नजदीक स्थित छ। यो एक दैनिक पानी दैनिक व्यापारिक स्थान हो, शहर को नजदीकी बारटोटो नदी तल स्थित छ, जहां एक अनुभवहीन पर्यटक धेरै रोचक हुनेछ। फ्लोटिंग बजार "सानो" पङ्क्तिको डुङ्गा (dzhukung) को हुन्छन्, जुन बिना आफैं पर्यटकहरू र साधारण खरीददारहरूलाई सामान प्रदान गर्न प्रयत्न गर्दछ। कहिलेकाँही, बजार डुङ्गा बेच्दछ।
मेगक्षमतामा, एक बाढी लगातार घटना हो, त्यहाँ एक ठूलो भूमि कमी छ, त्यसैले स्थानीय बजार नियमित रूपमा पानीमा व्यवस्थित गरिएको थियो। लक बुन्टन बिहान 5:00 बजे खुल्छ र 9:00 सम्मसम्म चल्छ। नदीमा व्यापारीहरू डुङ्गामा व्यापारीहरू छन् जसले सबै प्रकारका सामानहरू प्रदान गर्दछ: फलफूल र सब्जियां, चिन्ता र माछा, मसाले, साथै कपडा, घरको चीजहरू र कहिले काही पनि तयार-तयार भोजन। त्यहाँ बजारमा धेरै क्याफेहरू छन्, जहाँ तपाईं वांछित उत्पादनको प्रत्याशामा स्न्याक हुन सक्नुहुन्छ।
अस्थायी बजारमा सबै सामानहरू बेच्न बेचेको छैन, केहि बोटरको रूपमा बदलिन्छ: जसलाई सजिलै संग। व्यापारिक दिनको अन्त्यमा, केही शुल्कहरू जसले सानो शुल्कबोटमा धेरै टाढा पकाउँछ, सानो शुल्कको लागि, मोटरब्याटको साथमा ठूलो डुङ्गा लिन्छ र सबै घरहरू मार्फत लैजान्छ।
अस्थायी बजार कसरी प्राप्त गर्ने?
रंगीन वाटो बजारमा ट्याक्सी द्वारा भूमि वा पानी (भाडा डुङ्गा) द्वारा प्राप्त गर्न यो सबै भन्दा उपयुक्त छ।
सुल्तान सुर्यान्तिया मस्जिद
हिटकी को राष्ट्रीय समुद्र तट पार्क
ओप्टिकल भ्रमको संग्रहालय
Namhansanson को किला
दक्षिण कोरियाको कानून
जापानमा जलविद्युत् आयोजना
जादुई विवाद: केट मिडलेसनले बच्चाहरूलाई शाही तरिकामा बढाएको छैन?
कहिलेकाहीँ नयाँ जन्मेको पानी दिन?
हाउथर्न जाम - राम्रो र खराब
अंग्रेजी शेफर्ड कुत्ता
एक उपहार पैक कति राम्रो छ?
Mitlajderu मा सब्जी बगैचा
वजन कम गर्न उत्तम तरिका
आफ्नै हातले मिक्सबर्डर
Cruciferae बेडा नियंत्रण उपाय
विवाहको बोलोरो लामो आस्तीन संग
उच्च ऊँची एप्स मा शीर्ष-30 सबैभन्दा हार्दिक जूता
ल्यापटपका लागि ट्रांसफार्मर तालिका
विवाहको तयारी 2015
एक भित्री तोते को खाने को लागी - एक संतुलित आहार को लागि नियम
ड्रेस अप ड्रेसहरू
योगा शिक्षक कसरी गर्ने?
नाम एलिसले के गर्छ?